शारीरिक सम्पर्कका बेला यसो गर्छन महिलाले « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
शारीरिक सम्पर्कका बेला यसो गर्छन महिलाले
शारीरिक सम्पर्क महिला पुरुषबिच अति गोप्त तर प्राकृतीक प्रकृया हो। तर कतिपय मानिस यसबारे जानकारी लिन वा चर्चा गर्न लजाउने गर्दछन् । यौन भन्नसाथ मानिसलाई लाज लाग्ने गर्दछ । जसका कारण चासो भएर पनि मानिस यसबारे सोध्ने हिम्मत गर्दैनन् ।
तसर्थ आज हामी महिलाका बारेमा पुरुषले जान्नै पर्ने ५ रोचक जानकारी दिदैँछौ :
१. शारीरिक सम्पर्कका बेला महिलामा एस्ट्रोजनको स्तर बढ्ने भएकाले यसले अनुहारको छाला नरम हुने र कपाल चम्किलो हुन्छ साथै रक्तप्रवाह पनि बढ्ने गर्दछ । तसर्थ यस समय उनीहरु अधिक सुन्दर र आकर्षक देखिन्छन् ।
२. अन्य समयमा बेवास्ता गरे झै गर्ने महिलाहरु शारीरिक सम्पर्कका बेला पार्टनरप्रति अत्यधिक प्रेम दर्शाउछन् । यस बेला उनीहरुमा कामुकता बढ्ने भएकाले पुरुषको शरीर सुम्सुम्याउन र प्रेम दर्शाउन रुचाउँछन् ।
३. कुनै पनि चिन्ता वा तनावग्रस्त भएका बेला महिलाहरु शरीरिक सम्पर्कका लागी तयार हुन सक्दैनन् । तनावले महिलाको यौन रुचीमा कमी ल्याउँछ । तसर्थ तनावको सबैभन्दा बढि असर उसको यौन जीवनमा पर्ने गर्दछ ।
४. शारीरिक सम्पर्कअघि दुबै पार्टनरबीच मानसिक तथा शारीरिक तयारी हुनु पर्दछ । तर कतिपय अवस्थामा पुरुषहरु महिला पार्टनरको मुड नबुझि जबरजस्ती सम्बन्ध राख्न खोज्छन् । तर यसले बिस्तारै महिलालाई यौनबाट घृणा उत्पन्न हुन्छ । यौन इच्छा मरेर जान्छ ।
५. कतिपय ब्यक्तिमा शारीरिक सम्पर्कपछि योनीलाई सफा गरे वा केहि बेर टुक्रुक्क बसे गर्भ रहदैन भन्ने गलत मान्यता छ ।महिला गर्भवती हुन वीर्य योनिभित्र प्रवेश गरेपछि यो तीव्र रुपमा सक्रिय हुन्छ । तसर्थ यसो गर्दैमा गर्भ रहदैन भन्ने विश्वास गर्नु गलत हुन्छ ।
प्रकाशित मिति : १३ मंसिर २०७७, शनिबार ११ : २७ बजे